မင်းတာရာ – စေတန်ရဲ့ ပျော်ပွဲစားရာ | MoeMaKa Burmese News & Media
သွေ့ သွေ့ ငွေ့ ငွေ့ ဝဲဝေ့ တိုးခွေ့ ထိရှ လာတဲ့ လေပြေနွေးနွေးက…အေးအေးဆေးဆေးလေလေးတချွန်ချွန် စိတ်ပျော်ရင်း…ငြုပ်ပင်ပျိုတို့ ကိုမြေချနေတဲ့ ဇော်ကျဲနောင် ရဲ့ အပေါ်ခန္ဓာ အင်္ကျီဗလာ အသားညိုပြာပြာကိုရင်းရင်းနီးနီးမိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်းပမာ ပွတ်ထိနုတ်ဆက်လိုက်တော့…တဒင်္ဂလန်းလန်း ဆန်းဆန်းဖြစ်လိုက်ရ ..မြူးမြူးပျော်ပျော်…မြူးပျော်ရင်း…အတွေးတွေနယ်ကျွံ ရွေ့ လျှား….ခြေလက်များကတော့ မသိစိတ်ရဲ့ ထိန်းကျောင်းမှုအောက်မှာဟန်ညီညီရွေ့ လျှား တူးဆွစိုက်ပျိုးနေမိပေါ့..ငြုပ်ပင်ပျိုလေးများ အစီတရီ. ညီညီညာညာ………။
အာရုံလွန်စိတ်အစဉ်အတွေး..ဟိုးမဝေးတဲ့တနှစ်ကျော်..စစ်ပွဲရာသီရဲ့ စစ်ပွဲလှိုင်ထ ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့ လိုင်ဇာဒေသမှာ။ တအိုးတအိမ်. အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ လောကဓံကိုရေလိုက်ငါးလိုက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရုန်းကန်လှုပ်ရှား တ၀မ်းတခါး အတွက် သူလိုကိုယ်လိုစခန်းသွားနေရင်း.ရင်တွင်းဖြစ်ရတနာ..သားငယ်လေး ရဲနောင် ငယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငါ…အအေးအပူကို အပေးအယူတွေနဲ့ နားလည်ကြည်ဖြူတတ်တဲ့ ဇနီးအလှ.နန်းကလျှာ နဲ့ လက်တွဲလို့ နေ့ တဓူဝတွေကိုရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ် ကျော်လွှား ဒီဇနီး ဒီသား အဘယ်အလှတရားနဲ့ အစားထိုးလဲလှယ်နိုင်ငြားအံ့ သာယာအေးချမ်းလှပခဲ့..ငါ့ဘ၀…..။
တိမ်ပြာပြာရဲ့ အပေါက်အကြားက ရွှေရောင်ယိုးမှား…နေခြည်မျှင်များ..စိမ်းစိုကွင်းပြင်နှင့်တောင်တန်းတွေဆီ..နွေးထွေးတဲ့အနွေးဓါတ်တွေ…ဖြန့် ဝေကြဲပြန့် နေစေလေရဲ့ ။ တိမ်ညိုညိုနဲ့ ရွှေအိုရောင်နေခြည်.ပန်းချီကျော်တို့ လက်မှိုင်ချငေး..ဆေးရေးမှီအံ့မထင်..ကျေးလက်ရဲ့ ဒီတညနေ အဆင်းအလှအသွင်အပြင်…….။
ရိုးပြတ်ရဲ့ တဖက် ..ကျွဲ-နွားစားကျက်မှာ..ဘို့ ကြီးနှင့်အမြီးတို တို့နားစေ စားစေ. အပန်းဖြေနေကြသလို….။ ငါကိုယ်တိုင်လည်းတနေ့ ကုန်နီးပါးထွန်ယက်ခဲ့ရ လယ်ယာ။ မြေဆွ မြေနယ် ထွန်းရေးတွေကြွယ်မှအပင်လှလှဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်ရမှာမို့ .မြေစာတွေညှက်ညှက်ကြေ ပင်ပျိုအားကောင်း အသီးကောင်းတွေဝေပေမပေါ့ အတွေးအနာဂတ်ထဲမျက်မြင်..ချစ်ဇနီးနှင့် သားငယ်တို့ ကိုအလှဆင်ဖို့ အရေး..အိမ်ထောင်သည်ဖခင်ရဲ့ ရင်ထဲကတွေးရင်း…ပိတီအစိုင်အခဲတွေနဲ့ ………..။
အတွေးစဉ်တွေနဲ့ ..နွးတွေကိုဆွဲငင်..ရွာအ၀င်မမှောင်ရဖို့ အရေး..ချစ်ဇနီးနှင့်သားလေးတို့ ရဲနွေးထွေးမေတ္တာတွေနဲ့ ကြိုနေမှာမို့ မောပန်းခဲ့သမျှကို ပြိန်းရွက်ပေါ်ရေမတင်သလို သမုဒယဒီနွယ်နှစ်ပင်က ငါ့ဘ၀အမောတွေကိုဆေးကြောသန့် စင်စေပေါ့..ပျော်ရွှင်ရတယ်ငါ့ဘ၀။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် သော့သော့လျှင်လျှင်နဲ့ရွာအ၀င် ငါပျော်ရွှင် ထင်ခဲ့သမျှ နေ၀င်ဆည်းဆာပျိုခမျာ..အရိုင်းဆန်လွန်းသွေးလက်နက်တို့ ရဲ့ အော်ဟစ်ကြိမ်းဝါး.ချိန်းခြောက်အနိုင်ယူမှုအောက်..ရွှေအိုရောင်..ရောင်စဉ်အလှတရားမှာ မှိုင်းမှိုင်းဝေ ယမ်းငွေ့ တွေနဲ့အလိုမတူထွေးလုံးရစ်ပတ်နေလေပြီ…..ငရဲဘုံတစ်ခုက ငါ့တို့ ရွာအပေါ်အငြိုးတကြီးကျနေသည့်အလားနဲ့ …။ ပြေးလွှားအော်ဟစ် ဆူညံပွက်လောလို့ ။ ရွာသူရွာသားတို့ လည်း ရွာရဲ့ မြောက်ဖက်ကိုအလုအယက်ပြေးလွှာနေကြသလို. ရွာနေ..ခွေး.၀က် ကြက် ငှက် သက်ရှိမှန်သမျှတို့ လည်း ..ခြေဦးတည့်ရာ ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကယ်တင်ဖို့ အရေး ပြေးနေကြရလေပြီ။ ငရဲခန်းတခုဖြစ်သွားတဲ့..ငါတို့ ရဲ့ ရိုးသားငြိမ်းအေးတဲ့ နမ့်လင်ပါကျေးရွာလေး။
ဗုံးသံ အမြောက်ဆံတွေကြား..လူးလွန့် ရောထွေးပြေလွှားနေကြသည့်ရွာသူ/သားတွေအထဲ..ကလေးနဲ့ ဇနီး ကို မောကြီးပန်းကြီး.မျက်လုံးကို အကျယ်ဆုံးပြူးပြဲရှာဖွေတော့..တွေ့ ရလေပြီ မမြင်မစမ်းဟန် .သွေးအလိမ်းလိမ်း ဒယိမ်းဒယိုင်နဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း ရမ်းစွပ်ပြေးနေတဲ့ ငါ့ဇနီးကို…ပြေးပြီးတွဲဖက်ဆွဲပွေ့ ရင်း..မေးပြီးရင်းမေးဖြစ်နေမိတာက “ ငါ့သားလေးဘယ်မှာလဲ ငါ့သားလေးဘယ်မှာလဲ’ ကျယ်လောင်စွာမေးပေသည့်လည်း ကြောက်အားပိုသွေးပျက်သွေးလန့် နေတဲ့ ဇနီးသည်ဆီကမျက်လုံးပြူးပြူး အူးဝါးအူးဝါး တူးခြစ်ခြစ်မြည်သံကိုသာရင်နင့်စရာအဖြေရလိုက်တော့တယ်..သေမင်းတမန်တော်တွေက ငါ့တို့ အသက်တွေကိုစားသောက်ဝါးမျိုဖို့ စေတန် ရဲ့ အူမြူးရီ(ရယ်)မောသံမျိုးတွေနဲ့ တရွှီး.ရွှီး တရှဲရှဲ အသံပေးပြေး ပြေးလာနေလေတော့..ဇနီးသည်အား ထမ်းတ၀က် ချီပိုးပြေးလွှား….ကျည်ကွယ်ရာ..ရွာရဲ့ မြောက်ဘက်ဆီ….။
ကျည်ကွယ် မျက်ကွယ်…စစ်ဘီလူးသောင်းကျန်းလောင်မြိုက်ရာနယ်နဲ့ ဟိုတဖက်(လနဇူဂျာ)..စစ်ပြေးစစ်ရှောင်ရွာပြေးရွာရှောင်တို့ အား အရေးပေါ်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးရှိရာ.ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုရယူပြီးနောက်…ကြောက်မခန်းလိလိတွေနဲ့ ဝေးရာလွတ်ရာအေးရာရောက်ရပြီမို့ ဇနီးသည်အားချော့မော့မေးမြန်းကြည့်တော့..သားလေးခမျာ အရိုင်းဆန်ကျည်သင့်..စ လုံး စ သတ်စစ်ဘာမှန်းမသိတဲ့.ငါ့ ကလေး စစ်ပေးတဲ့ဒဏ်နဲ့ အချိန်မရောက်ခင် ကြွေလွင့်လိုက်ရတဲ့ကြယ်စင်တစ်ပွင့် ဖြစ်ခဲ့လိုက်ရပြီတဲ့လေ…..ဇနီးသည်အဖြစ်ကလည်း…ငါမသိနားမလည်တဲ့အကြောင်းချက်ဝေဒနာတချို့ ကြောင့် မျက်လုံးက ကြောင်တောင်ကန်းရရှာပေါ့..ငါတို့ မှာဘာအပြစ်ရှိလို့ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုး ခါးစည်းခံစားရတာလဲ..သားလေးကိုလွမ်းလို တမှိုင်မှိုင်တငိုငို.ဘယ်လိုကံကြမ္မ၀ဋ်က ဒီလိုဘ၀မျိုးကို ငါတို့ မိသားစုအတွက်အလိုရှိပါ့လိမ့်………..။
ရွာပြေးရွာရှောင်တို့ ရဲ့ ကွန်းခို .အားကိုးရာဒုက္ခသည်ရွာလေးမှာနေထိုင်ကြရင်း..သတိရတိုင်းသားလေးအကြောင်းတဆွေးဆွေးတမြေ့ မြေ့ ပြောရင်းငို…ငိုရင်နဲ့ ပြောနေတဲ့ အကန်းမလေးချစ်ဇနီး..ငါမကြည့်ရက်ရင်နစ်အောင်ခံစားရလည်း..ငါဘာများတတ်နိုင်မှာလဲ..ဇနီးသည်လက်ကလေးကိုအနွေးထွေးဆုံးအကြင်နာနဲ့ ညင်သာစွာဆုပ်ကိုင်.ပိုမိုနွေးထွေးတဲ့မေတ္တာပေး.လက်တွဲထားရင်း..နေ့ ရက်တွေကျော်လွှားခဲ့ရ…ခုတော့ရွာပြန်လို့ ရပြီတဲ့..သား နဲ့ ရွာကိုအလွမ်းတွေ..ပြေစေတော့မှာတဲ့….ပျော်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း…ဘယ်သင်းနဲ့ မှမလဲနိုင်……။
သတင်းစကားတွေ ငါတို့ ရွာမှာကြားရတယ်..တနိုင်လုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးကြတယ်တဲ့..ဖယ်ဒရယ်( ပြည်နယ်ပေါင်းစု)ပြည်ထောင်စု လိုဟာတည်ဆောက်ကြမယ်တဲ့..ဒီမိုကရေစီ ဆိုလား ငါတို့ နိုင်ငံမှာ စကျင့်သုံးနေပြီတဲ့..လိုင်ဇာကနေ..မြစ်ကြီးနား..မြစ်ကြီးနားကနေ..ဒီဇဘာင်္လထဲ ကရင်ပြည်နယ် ဖါးအံ မှာထပ်ပြီးဆွေးနွေးကြမလို့ တဲ့….ပြောသံဆိုသံကြားရတယ်..ငါတို့ ဝမ်းသာလိုက်တာ.ငါတို့ ဒါတွေဘာတွေမှန်းမသိဘူး..ငါတို့ သိတာ လိုချင်တာ..ငါတို့ လယ်ယာတွေမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ် ထွန်ယက်စားသောက်ရဖို့ …….ရွာတွေကိုပုန်းဆိုးတော မီးလောင်ပြင်တွေလို.လယ်ယာတွေကို အ၀ိုင်း အ၀ိုင်းချိုင့်ခွက်..ကြက်ဝက် ငှက် မကျန် သတ်ဖြတ်စေတတ်တဲ့ စစ်မီးလောင်တိုက်တွေ ငါတို့ ရွာမှာလာ လာမဖြစ်ရင်..ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..လို့ ပြန်ပြော
စစ်ပွဲတို့ ပျော်စံရာ..ကျေးလက်ဒေသရဲ့ အပြစ်မဲ့ရွာတွေ..စိမ်းလန်းစိုပြေရတော့မယ့်အရေး….သွေးလက်နက်တို့ ရဲ့ သေခြင်းတရားတွေသယ်သယ်လာတတ်တဲ့ကျည်လွတ်(ကျည်ငြိမ်း) ရာရွာတွေ ..ရွာနေလူထုတွေငြိမ်းအေး.သာယာတော့မယ့်အရေးတွေမို့ ….သာဓုခေါ်ရင်း အတွေးတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်နေရ……..။
စိတ်ဆိုး လက်ဆိုး..ဘယ်သူကိုဆွဲထိုးရမယ်မှန်း ငါ မသိပေတော့ဘူး…အသိတရားက သားမဲ့ဝေဒနာသည်မျက်မမြင်ဇနီးနဲ့ ..ဘ၀ရဲ့ ရှေ့ ခရီးမျော်လင့်ချက်ကြီးနဲ့ ဆက်မယ်လို့ ပျော်ရွှင်ကြံရွယ်ရယုံရှိသေး…တ၀ုန်းဝုန်းတဒိုင်းဒိုင်း..အရိုင်းဆန်သေမင်းတို့ ခ်ါသံတွေ..ပလူ ကောင်တွေအသိုက်ပျက် ပျံသန်းနေကြသလို..တည်ငြိမ်ခါစငါ့တို့ .ရွာလေးထဲ..ဧည့်ဆိုးအဖြစ်ရောက်လာပြန်ပြီ..။ငါ့တို့ ဘ၀တွေ ဆင်းရဲရခြင်းနက္ခတ် စစ်ဘေးဒဏ်သင့်နဲ့ ရစ်ပတ်ရပြီးရင်း..ရစ်ပတ်နေရ..အဖိုးပြောတဲ့ မနုသတ္တဒုလ္လဘဆိုတာဘာလဲ…ငါကြားဖူးတဲ့..လူသားအရင်းမြစ်ဆိုတာဘာလဲ..အခြေခံလူ့ အခွင့်ရေးဆိုတာဘာလဲ..နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲ..ငါတို့ ဘ၀တွေကအာဏာရှင်
လက်အောက်က စစ်ကျွန်တွေလား..တိုင်းပြည်က သံယံဇာတကျိမ်စာသင့်..ငါတို့ ကစစ်ဘေးစစ်ဒဏ်သင့် တချိန်လုံးဖြစ်နေရတော့မှာလား..အတ္တရှင်တို့ ရဲ့ ဖန်ဆင်းတဲ့ စစ်တလင်းထဲ..စစ်လောင်မီးဒဏ်သင့်ရင်း ကြိမ်ဆဲခြင်းသီချင်းဆိုရပေါင်းများစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဘ၀က ဘယ်တော့မှများ လွတ်ကျွတ်နိုင်ရပါ့မလဲနော်…….။ ။
မိခင်တို့ နှင့် ချစ်သူတို့ ကို သွေးမျက်ရည်တွေကျစေတဲ့…စစ်
ကလေးငယ်တို့ ရဲ့ဘ၀တွေနှင့် အနာဂတ်တွေကို ရိုက်ချိုးဝါးမျိုတဲ့ ..စစ်
အဖြေမဟုတ်တဲ့ စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲပြစ်ကြပါစို့ ………….။